Mayelana NATHI - Henglin Jialong Metal
Jialong imikhiqizo yensimbi ifektri, eyasungulwa ngo-2007, ingenye abakhiqizi bokuqala ezifuywayo wahlanganyela R & D, ukukhiqizwa kanye yokuthengisa izingubo Racks.
Emakethe yasekhaya inani elikhulu lokuphakelwa, lithengiselwa iMalaysia, iSingapore, iPanama, iVietnam kanye nomhlaba wonke.
ICaiyi izingubo isiphanyeko ibhizinisi eligxile ekukhiqizeni isiphanyeko sezingubo zikagesi, isiphanyeko sezingubo ezisongwayo sangaphandle nesiphanyeko sezingubo ze-aluminium.
UKUSUNGULWA NJENGAMANDLA OKUQHUBA, UKUTHEMBEKA NJENGESISEKO, UKWAKHA IKUSASA ELIPHUMELELAYO.
Iziphanyeko zethu zenziwe ngezinto zokusetshenziswa zekhwalithi ephezulu ze-aluminium alloy, futhi zelashwa ngokukhethekile ebusweni. Isiphanyeko sinezinto ezifanayo zokulwa nokugqwala nokulwa nokuguga eminye imikhiqizo efana nayo engeke ifane, futhi ihlala isikhathi eside.Imelana nezulu futhi ayikhuzi, okungcono kakhulu kuneminye imikhiqizo efanayo. Idizayini eqinisiwe phakathi iqinile futhi ihlala isikhathi eside, esetshenziselwa ukomisa izingubo kubhalkhoni lomndeni, ukulungele kakhudlwana nokugcina isikhala okuningi.
Bonke abasebenzi baqinisekisa ukuthi umsebenzisi ngamunye ukuhlinzeka ngemikhiqizo esezingeni eliphakeme, ingxenye ngayinye yenqubo ngayinye ihambisana ngokuqinile nezindinganiso zamazwe omhlaba zokukhiqiza nokusebenza.
Sisebenzisa imishini esezingeni eliphakeme, ungqimba lwezandla phezu kongqimba, nemishini yokukhiqiza umugqa esezingeni eliphakeme yasekhaya, isigaba sokukhiqiza i-workshop sicacile, ukusebenza kahle kokukhiqiza.
1: Ikhwalithi yomkhiqizo muhle kakhulu, ukwakheka kokubukeka kulula futhi kunesandla esivulekile, amandla wokuthwala aqinile, ukufakwa kulula, kufanelekile ukuthenga.
2: Ukuthungwa okuhle, ukufakwa okuhle, izesekeli eziphelele, impendulo enobuhlakani yokulawula okukude, elula futhi elula ukuyisebenzisa.
3: Sinamandla ngokwanele, futhi sihle isitayela, izingubo zokubeka nokomisa, i-UV ye-disinfection, umphumela wokomisa umoya, muhle impela!
4: Isigxobo sokumisa izingubo sihle ngendlela emangalisayo. Isigxobo siwugqinsi ngokwanele, siqinile futhi siqinile. Isibalo semigodi sanele izingubo zomndeni. Kulungile ukomisa ama-quilts amathathu aminyene.